London: shirweyne maalgashi oo loo furay Afrika | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka London: shirweyne maalgashi oo loo furay Afrika
London: shirweyne maalgashi oo loo furay Afrika
Shirweyne caalami ah oo socon doona muddo labo maalmood ah loogana hadlayo batroolka iyo gaaska Soomaaliya ayaa maanta ka furmay magaalada London ee xarunta waddankaasi Britain, waxaana sidoo kale qorsheyaashiisa ku jira in la helo warshaddo horumarsan oo gacan ka geysta soo saarista iyo sifeynta shidaalka Soomaaliya.
Shirkaasi oo ay waddajir u soo qabanqaabiyeen wasaaradda batroolka Soomaaliya iyo shirkadda CWC waxaa furay wasiirkii hore ee arrimaha dibedda Britain, William Huge oo hadda ah hoggaamiyaha aqalka hoose ee barlamaanka dalkaasi, waxaana shir guddoominaya madaxweynihii hore ee Nigeria Mr. Obasango, iyada oo ay goobjoog yihiin wakiilo ka socda shirkaddaha SHELL, TOTAL iyo kuwo kale oo badan.
Sidoo kale, madaxweynaha Puntland, Prof. Cabdiweli Maxamed Cali ayaa shirkaasi ka qeybgalaya, isaga oo metelaya Soomaaliya, waxaana lagu wadaa in khudbaddiisa uu ku soo bandhiggo dhammaan baahiyada loo qabo in maalgashi degdeg ah imminka lagu samaysto dalka.
Madaxweynayaasha Tanzania, Uganda, Ruwanda, Ghana iyo kuwo kale ayaa shirkaasi iyana lagu casuumay waxayna inta uu socdo shirku ka jeedin doonaan qorsheyaasha ay la tahay in xilligaan lagu maalgashan karayo qaaradda Afrika.
Dhinaca kale, boqorad Elizabeth ayaa qaddo sharaf ugu sameysay aqalka boqortooyadda madaxweynayaasha iyo martida kale ee ka qeybgelaya shirkaasi.
Previous articleMuqdisho oo askar ku dhinteen gaari shil la gelay
Next articleKay: yaan la carqaladeyn askarta nabad ilaalinta